Dhageyso :-Diyaarad sidey gargaar oo ka degtey magaalada Jowhar - Awdinle Online
Dhageyso :-Diyaarad sidey gargaar oo ka degtey magaalada Jowhar
November 12, 2019 (Awdinle Online) – Gargaar loogu talogalay dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee gobolka Sh/dhexe ayaa maanta laga dejiyey garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar.
Gargaarkan oo ka koobnaa teendhooyin,maro kaneeco,bustayaal iyo qalab kale ayaa waxaa soo gaarsiiyay maamul goboleedka Hirshabelle guddiga Gurmadka fatahaadaha ee dowlada Federalka Soomaaliya.
Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta dowlada federalka xubina ka ah guddiga gargaarka fatahaadaha Cabdi Canshuur Xasan oo deeqdan ku wareejiyay maamul goboleedka Hirshabelle ayaa sheegay inay tahay deeqdii ugu horeysay balse ay dowladu keeni doonto dhowaan deeqo kale.
Munaasabadii wareejinta deeqdan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare,guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle Cabdi Xuseen Geedi,wasiiro,xildhibaano iyo maamulka gobolka Sh/dhexe.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa u mahadceliyay guddiga gurmadka fatahaadaha waxana uu ku baaqay in la joogteeyo gargaarka.
Deegaano badan oo ku yaal hareeraha wabiga Shabelle ee degmooyinka Jowhar,Balcad iyo Mahaday ayaa waxaa saameyn weyn ku yeeshay fatahaadaha wabiga Shabelle waxaana kumanaan qoys oo ku nool deegaanadaas aysan haysan wadooyin ay ugaga soo gudbaan biyaha wabiga ee ku fatahay.
Previous articleGadoomiye mursal oo khudbad ka jeediyay Kulanka Guddiga Joogtada ah ee Baarlamanka Federalka Ethopia:- (Sawiro)
Next articleTaariikhda Taxanaha Golayaasha Sharcidajinta Baarlamaanada Soomaaliya